fialàn-tsasatra desambra 2006
Nandalo tao Paris indray aho tamin'ny fialàn-tsasatra farany teo ka dia nanandrana an'ity atao hoe "patinage" ity. Gorisagorisa amin'ny ranomandry ("glace". Fa tsy oram-panala na "neige" akory) moa izy ity. Koa mba tsy araka ny nahiana, fa dia mba mora nahay aho, ary tsy nianjera mihitsy :). Asa noho izaho efa nanao "ski" angamba.
Tao "MontParnasse-bienvenue" (anaran-tanàna ao Paris io) moa no toerana nanaovako ity gorisagorisam-bazaha ity . 5€ isan'olona no fidirana ( io 'zany no ofan'ny kiraro ), ary tsy voafetra ny ora ahafahana milalao.
Nisy radio frantsay iray izay koa nanasa ahy mba hiresadresaka momba ny kolo-tsaina malagasy, sy ny fomban'ny malagasy amin'ny andro fety toy izao ka dia nankany koa aho. Tsy ho lazaiko ny anaran'ilay radio, na koa ny anaran'ny fandaharana fa ny azoko tenenina dia ny hoe : ""radio parisienne" ilay izy ary mandefa mivantana ny fandaharany amin'ny aterineto. Koa dia raikitra indray ny fakàna sary rehefa vita ny resadresaka e : toy ity 'zao ny toeran'ny teknisianina.
Ity kosa ny toeran'ny vahiny, mpanentana, na mpilaza vaovao :
# Posted by tokinao :: Resaka mandalo:: Hametraka hevitra (37) :: Rohy maharitra :: Verindrohy (trackback) (0)